Sharcigii mamnuucayey isticmaalka bacaha lagu adeegto oo la diiday -
Sharci loogu talagalay in uu mamnuuco isticmaalka bacaha balaastikada ee magaalada Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota ayaa maanta si rasmi ah loo diiday.
Guddiga degmooyinka magaalada Minneapolis ayaa sannadkii la soo dhaafay u codeeyay, taagerayna sharci cusub oo lagu mamnuucayo isticmaalka bacaha lagu adeegto ama suuqyada alaabta looga qaato.
Sharcigan cusub ee xayiraya isticmaalka bacaha ayaa lagu waday in uu dhaqan galo maalinta Khamiista ee bish June ay tahay 1, 2017.
Haddaba 10-kii sharci miisaaniyaddeed ee uu maanta saxiixay Gofernetooraha Mark Dayton ayaa waxaa ku jiray oo kamid ahaa sharci magaalooyinka gobolka Minnesota ka reebaya in ay mamnuucaan isticmaalka nooc kasta oo bac, warqad ama caag ah.
Mamnuucidda bacaha ayaa walwal badan ku hayey qaar badan oo kamid ah ganacsatada magaalada Minneapolis. Ganacsatada qaarkood ayaa maalmahanba u digayey macaamiishooda. Dukaamada qaarkood ayaa ogeysiisyo la xiriira isticmaalka bacaha ku dhejiyey goobahooda ganacsi.
Diiditaanka la diiday ama la joojiyay in la mamnuuco isticmaalka bacaha ayaa ku soo hagaagtay maalin ka hor wakhtigii loo qabtay ganaaxa iyo joojinta isticmaalka bacaha ee magaalada Minneapolis oo la filayey in ay bilaabato maalinta beri ah. Haddaba ganacsatada iyo dukaanleeyda magaalada Minneapolis iyo waliba guud ahaanba gobolka Minnesota ayaa loo ogol yahay in ay sii wataan isticmaalka bacaha lagu adeegto.
Related Items:Featured, local, News, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis